Rugby – «Can 1B Junior » : hiady laharana voalohany ny Makis | NewsMada
Rugby – «Can 1B Junior » : hiady laharana voalohany ny Makis
Hiditra an-tsehatra, indray ny Makis de Madagascar sokajy “junior”. Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), sokajy 1B. Hiady ny toerana hiakarana amin’ny sokajy 1A, izy ireo amin’ity.
Hotontosaina, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny 25 – 28 aogositra, ho avy izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 1B), sokajy “junior”. Hiady izany, i Ogandà sy ny Makis de Madagascar ary any Maraoka kosa amin’ireo andro ireo ihany i Sénégal sy Maraoka.
Lalao mandroso sy miverina no hatao, ka izay ekipa be isa indrindra amin’ireo ekipa efatra ireo, no miakatra ao amin’ny vondrona 1A, amin’ny taona 2017. Jerena mandritra ireo lalao ireo, ny isan’ny baolina voatsindry “éssai” ny “bonus offensif” sy ny “défensif”, ny “goal average” sy ny “goal difference”.
Vonona hiatrika izany, ireo mpilalao 25 mirahalahy ao anatin’ny Makis de Madagascar. Nomarihin’ireo teknisianina, fa ny 11 amin’ireo efa niatrika fifaninanana iraisam-pirenena avokoa. Ankoatra izay, misy amin’ireo mpilalaon’ny Makis ireo, no milanja 100 kg ary mirefy 1, 80 m.
Natao nitovy tamin’ny an’ny “sénior” ny fikarakarana ireo mpilalao. Samy nomena, “maillot” roa avy ka ny iray hanaovana alakamisy, tsy averina intsony. Ny iray kosa ho entina alahady izay averina amin’ny Malagasy Rugby.
Izay ara-dalàna ihany
Ankoatra izay, nambaran-dRafalimanana Berthin, talen’ny fampiroboroboana ny rugby aty amin’ny ranomasimbe Indianina fa tsy maintsy manara-dalàna avokoa ireo klioba rehetra vao afaka mifidy sy miatrika ny fiadiana ny ho tompondaka, amin’ny taom-pilalaovana 2017. Takiana amin’izany, ny hananan’ny klioba ny sokajy rehetra D1, D2, D3, “junior”, vehivavy, ary ny “école de rugby”, izay vao mahazo ny “certificat de conformité”.
Notsiahiviny fa fepetra nataon’ny federasiona iraisam-pirenena (IRB) izany, hitakiana ny kalitaon’ny mpilalao, mpanazatra ary ny tomponandraikitra rehetra, ao anatin’ny rugby.